Amiirka Al-Shabaab u digay Ergada doorashadda Soomaaliya | KEYDMEDIA ONLINE
Abu Cubeyda ayaa sheegay in aysan jirin cid Al-Shabaab ka badbaadin doonto Ergada doorashadda, isagoo tusaale usoo qaatay kuwii hore ee la dilay.
MUQDISHO, Soomaaliya - Amiirka Kooxda Al-Shabaab Axmed Cumar Abuu Cubeyda ayaa soo duubay fariin maqal ah oo uga hadlayo doorashadda Soomaaliya, taasoo uu kusoo beegay munaasabadda Ciidul Adxa.
Fariinta maqalka oo soconaysa 35 daqiiqadood, ayaa Axmed Cumar Abuu Cubeyda si gaar ah hanjabaad iyo digniin ugu jirin ergada soo xulaysa Xildhibaanada Baarlamaanka 11-aad ee dalka.
"Waxaan digniin iyo dardaaran u direynaa ergada wax soo xusha... amnigiina ma sugi doonaan kuwa mansab raadiska ah, haku kedsoomina inaad dhaqaale heli doontaan, waxaad tusaale usoo qaadataan kuwii adinka horeeyay halka ay mareen," ayuu yiri Axmed.
Al-Shabaab ayuu sheegay inay beegsan doonto oaday dhaqameed kasta oo Xildhibaan soo doorta, waxaana fariintan u muuqataa mid Kooxda ku doonayso inay ku doonayso inay ku farageliso ama ku joojiso doorashadda soo socota.
Isagoo hadalkiisa sii wata, Abu Cubeyda ayaa xusay in dalka Soomaaliya lagu xumo amaro kasoo baxay Xalane, islamarkaana madaxda dowladda yihiin adeegiyaal ku shaqeeya danaha dalalka shisheeye sida uu hadalka u dhigay.
Ergo gaareysa 27,775 ayaa la filayaa inay soo doorato 275 Xildhibaan oo uu ka kooban yahay Gollaha Shacabka [Aqalka Hoose], ee Baarlamaanka, iyadoo Aqalka Sare oo 54 Kursi ah ay soo dooranayaan Baarlamaanada Maamul Goboleedyada.
In badan oo kamid ah ergadii doorashaddii 2016 waxaa dishay Al-Shabaab, iyadoo 150 ergo oo ka badbaadey sanadkii 2019 looga yeeray degaanada Kooxda ay maamusho, waxaa loo fidiyay cafis, iyagoo looga digay inay markale doorasho ka qeyb-qaataan.
Dhanka kale, Hogaamiyaha Al-Shabaab ayaa "gaallo" ku tilmaamay Culimada taabacsan dowladda Soomaaliya oo uu sheegay inay ku raaceen in dalka lagu xumo wax aan ahayn Kitaabka Alle, wuxuuna Abu Cubeyda sheegay inay la dagaalami doonaan.
0 Comments Topics: al-shabaab doorashadda soomaaliya